NgoMatshi 2021-Funda ukuRhweba
Khuphela iNkonzo yokuRhweba
Inyanga: Matshi 2021
I-PayPal Rolls Out 'Checkout with Crypto' yabathengi baseMelika
Ukuhlaziywa: 31 Matshi 2021
I-PayPal kunye neVisa zityhile izicwangciso zokukhuthaza ukusetyenziswa kwemali yeqonga kwiqonga labo, ngaloo ndlela bonisa amaziko emveli emali ngendlela yokujongana nokungazinzi okukhoyo okuza neli qela leeasethi.
I-PayPal ibhengeze ukuba inenkonzo entsha yokusebenzisa i-cryptocurrency, Ukuphuma kunye ne-Crypto, evumela abathengi ukuba bathenge kwizigidi zabakhethi beintengiso abakwi-intanethi ngokukhetha ii-cryptocurrensets ezimbalwa kwiiakhawunti zabo ze-PayPal. Esi sibhengezo siza kwiinyanga ezimbalwa emva kwesigqibo senkampani sokuvumela abathengi baseMelika ukuba bathenge, babambe, kwaye bathengise ii-cryptocurrensets kwi-akhawunti yabo ye-PayPal simahla.
Ngeli xesha, iVisa ibhengeze kwangoko kule veki ukuba izakuphehlelela iindawo zokuhlala zedijithali kwinethiwekhi ngokusebenzisa i-dollar esekwe kwi-dollar. Isisombululo esikhulu seentlawulo siqaphele ukuba le ntshukumo yayingumboniso wokusebenza kwayo neenkampani ze-fintech eziyinzalelwane yase-crypto.
Ukuphuma kwePayPal kunye ne-Crypto kuya kuqinisa amandla ayo ngokugcina i-cryptocurrency yabathengi kwigumbi layo. Ngesigqibo sayo sokulawula ukuguqulwa kwemali kuphela kwindawo yokuthenga, i-PayPal iyaluthintela uxanduva lokutshintsha kwexabiso kwimali engaphantsi.
Ezinye iingcali zezezimali ziye zatsho ukuba emva kwenkqubo entsha ye-PayPal, iibhanki ezininzi kunye neenethiwekhi zamakhadi ngoku ziphantsi koxinzelelo lokwenza iqhinga elifanayo lokugcina abathengi babo.
Phuma ngeCrypto ngoku iNkxaso yeeDijithali ezi-XNUMX kuphela
Inkampani yezisombululo zentlawulo iqaphele ukuba iya kuyikhupha inkonzo yayo entsha eMelika iyodwa, nedola yaseMelika njengemali engaguquguquki yokuthengiselana, enokuguqulwa iye kwezinye iimali kumanqanaba aqhelekileyo okuguqula i-PayPal. Inkampani yongeze ukuba inqaku elitsha liza kongezwa ngokuzenzekelayo kwiindawo zokuphuma kubo bonke abathengisi be-PayPal.
Oko kwathethiyo, Ukuphuma nge-Crypto okwangoku kuxhasa ukuthengwa kweBitcoin (BTC), i-Ethereum (i-ETH), iBitcoin Cash (BCH), kunye neLitecoin (LTC) kwaye iya kuhlawulisa abathengi intlawulo zero zero yokuphuma kwemali ye-cryptocurrency.
Unokuthenga iingqekembe ze-crypto apha: Thenga Iingqekembe
tags Cryptocurrency, iindaba, PAYPAL, VISA
Uqoqosho lwaseCanada lukhule ngakumbi ngoJanuwari
NgoJanuwari yinyanga elungileyo kuqoqosho lwaseCanada. Ngaphandle kokuqinisa izithintelo kwezempilo yoluntu e-Ontario naseQuebec, ukubuyela kwimeko yesiqhelo kuye komelela, kubonisa ukomelela koqoqosho kwindyikitya yokufa. Ngokuqikelela iStatistics Canada ukuqikelela ukukhula ngoFebruwari, ikota yokuqala ka-2021 izakulunga kakhulu eCanada.
I-GDP iyonke inyuke nge-0.7% ngoJanuwari, ibhetele kunengqikelelo yeStatistics Canada kwinyanga ephelileyo kwaye ngaphandle kwamanyathelo obungqongqo okhoyo ngeli xesha. Ukuthengisa kuthengisile kwakhona njengoko iivenkile ezigciniweyo zigcina zithintelwe kulo lonke ilizwe kwaye iinkonzo zokuhlala kunye neenkonzo zokutya zihlala zibuthathaka.
Icandelo lezamashishini lilonke liqhubekile nokubonisa amandla, ngemveliso, ulwakhiwo, kunye nokumbiwa kwemigodi, kunye nemveliso yeoyile kunye negesi ngokudibeneyo inyuke nge-1.9% xa kuthelekiswa noDisemba wonyaka ophelileyo. Kwaye oku ngaphandle kokudodobala kushishino lweemoto, apho imveliso yehle nge-3.2% ngenxa yokuphazamiseka kwemveliso okuqhubekayo okubangelwe kukunqongophala kweemiconductor zehlabathi.
Kwangelo xesha, i-COVID-19 ihlala ingumngcipheko wokukhula umva, ubuncinci kwixesha elifutshane. Iintsholongwane zonyusa inani lamatyala kwilizwe liphela, kwaye amaphondo anyanzeliswa ukuba aqinise izithintelo. Umzekelo, iBritish Columbia, sele ibeke imiqobo kwizinto zangaphakathi.
ICoronavirus Wave yesithathu isongela ukukhula
Igagasi lesithathu lentsholongwane kwakhona lisongela ukuthoba ukubuyiselwa kwezoqoqosho. BC. Ukutshixeka kweeveki ezintathu nge "umephuli wojikelezo" sele ingenisiwe, kwaye ialam ivakala e-Ontario. Nangona kunjalo, okunye ukwehla kwimisebenzi yezoqoqosho kujongeka kunqabile ukuba uqoqosho lukwazi (ngokuzithemba) ukukhula ngexesha lomjikelo wesibini.
Okwangoku, ukusasazeka kwesitofu sokugonya kuyanda, kwaye iCanada ngoku ilindele ukufumana malunga ne-44 yezigidi zeedosi zokugonya ukuphela kukaJuni- zanele ukugubungela amaqela abasemngciphekweni wobudala (ngaphezulu kwe-60) ngokudutyulwa kabini, kunye nabanye ngaphezulu kwe-16 ngomnye.
Ukuhanjiswa ngokukhawuleza kwezitofu zokugonya kuya kuwunciphisa kakhulu umthwalo wendyikitya yokufa kuqoqosho. Isantya sokuthunyelwa sikhawulezile kwezi veki zidlulileyo kodwa kufuneka siqhubeke nokuqinisekisa ukuvulwa okukhuselekileyo koqoqosho entwasahlobo nasehlotyeni. Iingxaki zonikezelo okanye ukuthandabuza malunga namachiza kunokuphazamisa ukubuyela kwezoqoqosho.
tags Cad, Uqoqosho lwaseCanada
I-FTSE 100 (UKX) iqhubeka neNdlela yayo esecaleni, iphinde iqale iDowntrend
Ukuhlaziywa: 1 April 2021
Inqanaba lokumelana7500, 7600, 7700
Inqanaba leNkxaso: 7300, 7200, 7100
I-FTSE 100 (UKX) yexesha elide: UkuHamba
FTSE 100 ikwindlela esecaleni. Isalathiso sithengise ngaphantsi kokuchasana kwinqanaba le-6800. Ukusukela nge-6 kaJanuwari, inqanaba lokumelana alophukanga. Nge-6 kaJanuwari, iinkunzi zeenkomo zaphula uxhathiso kodwa amandla okonyusa amandla awazukuqhubeka. Isalathiso sachaswa saza sawela kwinqanaba lama-6400. Isalathiso besitshintsha-tshintsha phakathi kwamanqanaba angama-6500 kunye nama-6800.
I-UKX-Itshathi yemihla ngemihla
Ukutsalwa kwezalathi zemihla ngemihla:
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zijike ngokuthe tyaba zibonisa imeko esecaleni. Okwangoku, isalathiso sikwinqanaba lama-51 lesalathiso samandla esihlobo. Ibonisa ukuba kukho ulungelelwaniso phakathi konikezelo kunye nemfuno.
I-FTSE 100 (UKX) yeXesha eliPhakathi leNdlela: Ukulinganisa
Kwitshathi yeYure ezi-4, i-FTSE 100 ikwixabiso lentengo. Isalathiso sibuyisela inqanaba lama-6800 ukuba liphule ngaphezulu. Ukunyuka okuya phezulu akunakwenzeka ngenxa yoxinzelelo lokuthengisa ngaphezulu kwenqanaba lama-6800. Namhlanje, isalathiso siyawa emva kwenqanaba lokuphinda ubuye 6780.
Itshathi ye-UKX-4 yeyure
Isalathisi seeyure ezingama-4 Ukufunda
I-UKX ingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Amabhanti e-stochastic athambile ngezantsi kwe-80% ebonisa ukuba imakethi ikwimeko ye-bearish. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zee-SMA zijike ngokuthe tyaba zibonisa imeko esecaleni.
Umbono ngokubanzi we-FTSE 100 (UKX)
I-FTSE 100 (i-UKX) ikwiindawo ezibotshwayo. I-UKX ithengise ngaphantsi kokuchasana kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo. Iinkunzi zeenkomo azikwazi ukwaphula ukuxhathisa kwinqanaba lama-6800. Okwangoku, i-UKX iyatshintsha phakathi kwamanqanaba angama-6400 ukuya kuma-6800.
Phawula: U-Learn2.Trade akangomcebisi wezezimali. Yenza uphando lwakho ngaphambi kokuba utyale imali yakho kuyo nayiphi na iasethi eyimali okanye imveliso ebekiweyo okanye umsitho. Asinaxanduva lweziphumo zakho zotyalo mali
tags FTSE 100, Uhlalutyo Technical, I-UKX
Vechain (VET) Uhlalutyo lwamaxabiso: I-Vechain ikwiNdlela esecaleni, ukuLulwa kobuso kwi $ 0.095
Iindibano zexabiso leVechain ukuya kuthi ga kwinqanaba leedola i-0.09 kwaye iqala kwakhona ukuhamba ecaleni
I-altcoin inexabiso ekujoliswe kulo le- $ 0.11
Vechain (VET) Ubalo lwangoku
Ixabiso langoku: $ 0.08638
Intengo yeNtengiso: $ 7,491,123,024
Umthamo wokuThengisa: $ 7,491,123,024
Iindawo ezinkulu zokubonelela: $ 0.10, $ 0.11, $ 0.12
Iindawo ezifuna kakhulu: $ 0.07, $ 0.06, $ 0.05
Vechain (VET) Uhlalutyo lwamaxabiso ngoMatshi 31, 2021
I-Vechain ibikwimeko egudileyo ukusukela ngoFebruwari. Uptrend uphazamisekile nge-21 ka-Matshi njengoko i-altcoin yaqala kwakhona ukuhamba ecaleni. Iinkunzi zeenkomo zazingavunyelwanga kwinqanaba eliphezulu leedola le-0.095 njengoko ixabiso lehle laya kwi-0.076 yeedola ezisezantsi. I-uptrend iya kuqhubeka kwakhona ukuba iinkunzi zeenkomo ziyaphula ukuxhathisa kwi- $ 0.095. Ngo-Matshi 23 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Oku kubuyiselwa endaweni kubonisa. I-VET inokuthi inyuke iye kwinqanaba le-1.272 yokwandiswa kweFibonacci kunye nokubuyela umva. Lelona nqanaba liphezulu le- $ 0.11.
VET / USD-Itshathi yemihla ngemihla
IVechain (VET) iZalathi zoBuchule zokuFunda
I-VET ikwinqanaba lama-61 le-Index ye-Relative Strength Period 14. Ibonisa ukuba i-altcoin ikwindawo ye-uptrend kwaye ingaphezulu kwe-50. I-VET ingaphezulu kwe-21% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imarike ikwisantya esiphezulu.
I-VET / USD-4 Itshathi yeYure
Kwitshathi ye-4- yeYure, iVechain ikwindlela esecaleni engezantsi koxhathiso kwi- $ 0.095. Ngalo lonke ixesha ixabiso liphinda libuyise indawo yokuchasana, i-altcoin iya kwehla isezantsi i- $ 0.08. Ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe ku-Matshi, ikhandlela elibuyise umzimba lavavanya i-27% yeFibonacci level yokubuyisela. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-altcoin iya kudibana kwinqanaba le-61.8 yeFibonacci eyandisiweyo okanye ephezulu yeedola eziyi-1.618. 0.
tags Uhlalutyo lwamaxabiso, Vechain, NOGQIRHA, I-VET / i-USD
I-US100 yajikela kwicala elingasentla!
I-US100 (Nasdaq 100) ithengisa kwinqanaba le-13,118 kwaye kubonakala ngathi izimisele ukuphinda ikhule ukukhula kwayo ukuba itsiba ngaphezulu kweziphezulu zangaphambili. Icala elisezantsi libonakala linomda emva kokusilela kokuqinisekisa isigaba esibanzi sokulungisa.
Isalathiso siqhuba emva kokuba i-US ikhuphe i-ADP-engekho eFama yeNgqesho yoTshintsho. Isalathi sezoqoqosho sixelwe kwi-517K ephezulu xa ithelekiswa ne-176K kwixesha lokufunda elidlulileyo nangaphantsi kwe-552K elindelekileyo.
Uhlalutyo lobuGcisa lweNasdaq 100!
I-Nasdaq 100 -Umthombo: ukurhweba.com
I-US100 ikhula ngobundlongondlongo emva kokubaleka kumzimba omncinci wefolokhwe. Ixabiso aliphumelelanga ukufikelela kumzimba omkhulu wefolokhwe, ngenxa yoko ngoku ungasondela kwaye ufikelele kumgca ophezulu we-meridian (UML).
Iphuhlise unxantathu ohambelanayo kwixesha elifutshane, ke ekujoliseni kwicala elingaphezulu kunokuqinisekisa ukukhula ngakumbi. Ukuqhekeka okusebenzayo ngaphezulu kwe-R1 (13,235) kwaye nge-13,356 ephezulu kunokuzisa ithuba elide.
Ukuqhekeka okundlongondlongo ngaphezulu komgca we-pitchfork ephezulu (uml) kunye nenqaku le-pivot 12,931 elandelwa kukuqhekeka okuphezulu kwipateni yangoku kungazisa ithuba lokukhuthaza.
U-Olimpiu Tuns uthweswe isidanga se-Master kuLawulo lwezoShishino kwaye uneAnalyst / uMrhwebi / uMqeqeshi onamava onamava kwiminyaka eli-10 yamava kwiimarike zezemali ezinobungcali kwi-Forex, Commodities, Index, Cryptocurrencies, nakwiStock. Usebenze njengoMhlalutyi weNtengiso kwiinkampani ezintathu ezinkulu zabarhwebi, njengomrhwebi wepropu, nanjengegalelo / umyili womxholo kwiiposti zeendaba kunye namaqonga ezemfundo.
Jonga zonke iiposti zika-Olimpiu Tuns
tags NASDAQ, I-Nasdaq 100, Us100
I-USDCAD iphinda izame ubume be-bearish
Inkcaso ephambili: 1.2600
Inkxaso ephambili: 1.2480 - 1.2360
I-USDCAD yahlanganisa i-2.30% kwiiveki ezi-2 zokugqibela ikakhulu ngenxa yamandla e-USD kunye nobuthathaka obuCrude.
Kule veki abathengi baqhubeka bezama ukwaphula iiveki ezidlulileyo kude kube izolo malunga nalapho babenokubona nje abathengisi bethoba ixabiso ezantsi ukusuka kwi-1.2640
Oku kusinike ukuseta kwethu xa ukwaliwa kwenzeka ngelixa ujonge iveki enye yokuxabana okungafaniyo.
Kwimihla ngemihla, oku kulahlwa kukuphinda ubuye kwisiseko sikaJanuwari 2021 esigqabhuke ekugqibeleni. Yonke into yalatha ekuqhubekeni kwe-bearish, ngakumbi ioyile izama ukuphuma kwinqanaba le-62.
Igolide ibhuza kwinkxaso enkulu
Inkxaso ephambili: 1684
Ukuchasana okuphambili: 1725 - 1750
Igolide efakwe kule veki ukusuka kwi-pivot yeveki ukuphinda uphinde ubuye kwinqanaba le-1680. Njengoko kuxoxiwe ekuqaleni kwale veki eli nqanaba yinkxaso enkulu kwimihla ngemihla / ngeveki kwaye kunokwenzeka ukuba imali enkulu iza kungenelela.
Kwizakhelo zamaxesha asezantsi (1H) sabona amaxabiso enqaba eli nqanaba ngelixa uprinta ukungafani okukhulu. Ukungena kwethu silinde ukuphakama kwesiseko kwaye sijolise kwiiveki ezidlulileyo / ipivot yeveki.
Igolide ngoku inyuke nge-1.1%
I-S & P 500 i-Dwindles Phambi kwe-4000 yeNqanaba eliPhambili leNqobo phakathi koKukhula koNondyebo wase-US
Uhlalutyo lwexabiso le-S & P 500-Matshi 31
Isalathiso se-S & P 500 sanyuka saya kuma-3,983.4 ngeveki ngoMvulo, kodwa icala eliphambili liye lancipha ngaphambi kwezithintelo eziphambili ze-4000 kwiseshoni yangoku. Isivuno sikaNondyebo we-US seminyaka eli-10 sihlala siqinile kwelona liphezulu ukusukela ngeyoMqungu 2020. Idola kunye nesivuno saseMelika sizakuqhubeka nokukhula ngenxa yeziphumo zoqoqosho ezomeleleyo.
Amanqanaba okumelana: 4100, 4050, 4000
Amanqanaba enkxaso: 3950, 3900, 3840
I-S & P 500 yexesha elide iTrend: Ranging
Njengoko kubonwe mihla le, uptrend unokulindelwa ukuba unyibilike kwaye uhlale phantsi kwamanqanaba e-4000, ngelixa intengiso ithengisa ngaphezulu kwe-MA 5 kunye ne-13 yemihla ngemihla, idityaniswa ngakumbi kwiseshoni elandelayo, eya kulandelwa kukuzama kwakhona ukunganyangeki. inqanaba kuma-4000.
Izalathi zobuchwephesha ngoku ziyaxhasa ukujonga okungafaniyo njengoko i-RSI isiya kufundo lwayo lwasembindini kwi-50 ngelixa ixabiso lihle laphantsi emva kokubuyiselwa ukusuka phezulu ngeveki kumanqaku angama-3,983.4. Umndilili ohambayo we-5 kunye ne-13 zigcina indawo yazo kwaye zinokuhamba ngokuthe tye kwimbonakalo yexesha eliphakathi.
I-S & P 500 yeXesha elifutshane eliQhelekileyo: Ukulinganisa
Kwixesha elifutshane, isalathiso se-S & P 500 sikweli jelo liphakamileyo emva kokungena ngaphezulu kwendawo yokudityaniswa kwamanqanaba e-3,950 ekupheleni kweveki engaphambili. Njengoko ixabiso litsibe ngaphezulu kwezithintelo ezingama-3,950, ulindelo kukuphinda kubekhona kwirekhodi yokuphakama kumanqanaba angama-3,991 ngaphambi kokubuyela umva.
Nangona kunjalo, ukudityaniswa okwandileyo okuphezulu kunye nokuhla kweeyure ezi-4 zoMbane oMandla oLumkisayo kulumkisa ngobuthathaka obuya kuzisa iibhere ngokupheleleyo kumdlalo wekhefu eliqinisekileyo le-3,950 pivots. Isimo esilindelweyo sibekwe ngaphantsi kwamanqanaba angama-3,900 kujoliswe kuwo kuma-3,840 nakuma-3,800 amanqanaba okwandiswa.
tags I-S & P 500, Uhlalutyo Technical
I-Ripple vs SEC: Abanini be-XRP bafumana iNkundla yokuVunywa ukungenelela
I-Ripple (XRP) Ufumene ukuphefumla kumlo wakhe oqhubekayo wezomthetho kunye neKhomishini yoKhuseleko kunye nokuTshintshiselana yase-US (i-SEC), kulandela isigqibo sikaJaji weSithili u-Analisa Torres sokuvumela abanini beXRP ukuba bangenelele kweli tyala.
Ngokweengxelo zamva nje, malunga ne-6,000 yabanini be-XRP bancenga ukuba bathathe inxaxheba kwityala lenkundla eliqhubekayo phakathi kweRipple Labs kunye ne-SEC. UJohn Deaton weDeaton Law Firm LLC, kunye nomtyali mali weXRP, bafaka isindululo esithi ityala eliqhubekayo liya kubachaphazela abanini / abatyali mali hayi inkampani ephela kwi-cryptocurrency.
Inkundla yaseMelika eNew York isigunyaze isigqibo sikaDeaton sokufaka isicelo sokungenelela. Umyalelo wenkundla ufunda ukuba isindululo kufuneka sifayilishwe ngomhla okanye phambi kuka-Epreli 19. Umyalelo wenkundla wongeze ukuba emva kokungeniswa iKhomishini ine-Meyi 3 ukukhupha impendulo ephikisayo.
Okubangela umdla kukuba, inkundla ivume isicelo sikaDeaton emva kokuba i-SEC ifake isimangalo esihlonyelweyo, esiqwalasele ukuba iya kuba "yinto efanelekileyo yokuvumela bonke abatyali mali kunye namalungu anomdla oluntu aneembono ezahlukileyo ukuba angenelele kwizenzo ezisisiseko." I-SEC yongeze ukuba ukuvunywa kuya "kudala isiphithiphithi samabango kunye nokuqiniseka ngokuqinisekileyo kokulibaziseka okungafanelekanga, ubunzima kunye nokudideka."
Amanqanaba aphambili eXRP aBonwayo-Matshi 31
Ukulandela ukubuyela kabukhali kwinqanaba le-0.4500 yeedola kwiveki ephelileyo, uRipple ubonakala ngathi uwele kumthamo wokubopha uluhlu kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. I-cryptocurrency yesixhenxe ngobukhulu ngoku idibanisa phakathi kwe- $ 0.5800 kunye ne- $ 0.5400 yexabiso lamaxabiso kwaye ijongene nomngcipheko wokwenyani wokuwela ngaphantsi kwesiphelo esisezantsi sommandla wepivot.
Oko kwathethi, sinokubona ukunyuka kwexabiso eliphantsi ukuya kwi-0.5600 yeedola kwiiyure ezizayo, kulandele isilayidi esiya kwi-0.5400 yeedola yenkxaso okanye esezantsi.
Okwangoku, amanqanaba ethu okuchasana akwi- $ 0.5600, $ 0.5700, kunye ne- $ 0.5800, kwaye amanqanaba enkxaso akwi- $ 0.5400, $ 0.5250, nakwi- $ 0.5100.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.84 zezigidi
Uqoqosho lweRiple capitalisation: $ 25 billion
Ukulawula kweRipple: 1.36%
tags Cryptocurrency, iindaba, Ripples, sec, XRP
Ingakanani I-oyile yaseMelika enokuthi ibe yiyo?
Ioyile yase-US (i-WTI) yehle kwixesha elifutshane emva kokufikelela kwindawo yokuchasana. Ngokwenyani, ukwehla okwethutyana kwakulindelwe ngandlela thile emva kokuba i-rally emangalisayo yaqala ngo-Novemba ngo-2020.
Wonke umntu uyazibuza ukuba inqanaba lokulungisa liza kuqhubeka emva kokubuya kwexesha elifutshane ukusuka kwi-57.28, okanye ixabiso leoyile laseMelika liza kuphinda liqhubeke kwakhona, ixesha elide, ixesha eliphakamileyo.
Ngokwam, ndiyakholelwa ukuba isenzo sexabiso siza kuzisa isiqinisekiso kungekudala.
Itshathi yemihla ngemihla yeoyile yaseMelika!
Ioyile ye-WTI yaliwa yi-66.58- 65.62 yokumelana nendawo. Ukuqhawuka okungamanga kunye nokuzama ukubonakalisa ukwehla okunokubakho. Ngoku kuthengiswa ngaphezulu kwenqanaba lokubuyiselwa kwe-23.6% nangaphaya kwenqaku le-pivot (58.98).
Ixabiso lingangumceli mngeni kumgangatho wokubuyiselwa kwe-23.6% kunye nenqaku le-pivot kwakhona ngaphambi kokuthatha isigqibo malunga nento eza kuyenza kwixesha elizayo.
Namhlanje, i-US iza kukhupha idatha ye-Crude ye-oyile engalunganga eya kuthi ibe nefuthe elikhulu kwixabiso leoyile.
Uluhlu lweoyile ekrwada lunokuthatha isigqibo!
Isalathiso sinokuhla ukusuka kwi-1.9M ukuya kwi -1.3M kwiveki ephelileyo. Ukulahla kumhlaba ongalunganga kunokunceda ukuba ixabiso lenyuke kwakhona.
Okwangoku, ukwanda kunokuba okwethutyana, yiyo loo nto sifuna isiqinisekiso esomeleleyo kuhlalutyo lobuchwephesha.
I-bias ihlala ikhuthaza nangona isigaba sokulungisa siya kuqhubeka. Ngoku kubaluleke kakhulu ukuchonga apho ukwehla, ukubuyela umva kuphele ukuze ukwazi ukuhamba ixesha elide kwixabiso leoyile yaseMelika kwaye ubambe eyona nto iphambili.
Ukuba ufuna ukufumana uphawu lokuthenga olulandelayo xa ulungiso luphelile bhalisela kwisiteshi seVIP APHA
tags ioyile, Ioyile yaseMelika, Ioyile yeWTI
← Entsha izithuba1 2 ... 27 abaDala izithuba →